Tababare Solskjær oo sheegay hal arrin ay Manchester United u baahan tahay inay sameyso – Gool FM
(Manchester) 30 Sebt 2019. Manchester United ayaa caawa ku soo dhoweynaysa kooxda reer London ee Arsenal garoonka Old Trafford, si ay u wada ciyaaraan kulan ka tirsan horyaalka Ingiriiska ee Premier League.
Macalinka Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær ayaa xaqiijiyay in Red Devils ay u baahan tahay inay heshiis la gasho weeraryahan cusub, kaddib markii ay kooxda dhawaanahan wajahday dhaawacyo.
Manchester United ayaa iska iibisay xiddigooda reer Belgium Romelu Lukaku suuqii xagaaga ee la soo dhaafay, halka sidoo kale Alexis Sanchez ay ku fasaxday qaab amaah ah.
United-ka waxaa haatan dhaawacyo kaga maqan xiddigaha Marcus Rashford iyo Anthony Martial, sidaas darteed tababare Ole Gunnar Solskjær ayaa u baahan inuu sameeyo heshiis weeraryahan cusub ah, suuqa furmi doono bisha janaayo ee soo aadan.
Sida laga soo xigtay saxaafadda, waxaa jira magacyada in ka badan hal ciyaaryahan ee lala xiriirinayo u dhaqaaqista garoonka Old Trafford suuqa furmi doono bisha Janaayo waxaana ka mid ah Mario Mandžukić, Paulo Dybala, Jadon Sancho iyo Weeraryahanka Lyon ee Moussa Dembélé.
Tababare Ole Gunnar Solskjær ayaa wareysi dhinacyo badan taabanaya ee quseeya kooxdiisa uu maanta bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Waxaan raadineynaa hal abuur iyo goolal, sidaas darteed wax micno ah ma sameeneyso inaad qanciso ciyaaryahan kasta oo aadan hubin in 100% uu sameyn doono wixii aad raadineysay”.
“Marka aad la saxiixato ciyaaryahan, waa inaad hubisaa inuu noqon doono mid faa’iido leh, sababtoo ah waxaad u baahan tahay ciyaartooy kula sii joogi kara muddo aan yareen”.
“Xaqiiqdii waxaan u baahanahay inaan la soo wareego weeraryahan cusub, waxaan haysanaa in ka badan hal ciyaaryahan ee xor ah oo aan lasoo saxiixno karno hada, laakiin nama siin doonto arrintaas tayada aan u baahanahay”.